Maxaad ka taqaanaa 5-ta qareen ee Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Maxaad ka taqaanaa 5-ta qareen ee Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda?
Maxaad ka taqaanaa 5-ta qareen ee Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda?
Maxkamadda caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ayaa maalintii labaad dhageysaneysa dacwadda muranka badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaana labada maalmood ee ugu horreysa fursadda la siiyay qareennada matalaya dowladda Soomaaliya.
Soomaaliya oo hadda kaligeed dacwadda laga dhageysanayo waxaa u taagan ilaa shan gar yaqaan oo heer caalami ah oo difaacaya doodda Soomaaliya ee ku aaddan in badda ay iyadu leedahay. Sidoo kale waxaa jira qareenno kale oo ka qeyb qaadanaya caawinta Soomaaliya.
Maxaan ka naqaannaa qareennada u doodaya Soomaaliya?
1- Paul S Reichler
Garyaqaan Paul S Reichler
2- Prof. Philippe Sands
Garyaqaan Prof. Philippe Sands
3- Prof. Alain Pellet
4- Alina Miron
5- Edward Craven